Sonsoles एनेगा पुस्तकहरु: जोश, कच्चापन, प्रेम, मानवता र अधिक | वर्तमान साहित्य
Sonsoles Booksnega द्वारा पुस्तकहरू
Sonsoles - नेगा
जब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो वेब ब्राउजरमा "Sonsoles Ónega Libros" प्रविष्ट गर्छन्, सामान्य परिणामहरू सम्बन्धित छन् प्रेम पछि (२०१ 2017) यो एक वास्तविक जीवन कहानीमा आधारित काम हो जुन, उही वर्ष जारी भएको थियो, एनेगाले फर्नान्डो लारा उपन्यास पुरस्कार जित्न नेतृत्व गर्‍यो। एक हजार चुम्बन निषेधित (२०२०) पनि संयोगको बीचमा बाहिर खडा छ, र यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन। यो समकालीन रोमान्टिक उपन्यास सबैभन्दा स्पेनिश लेखकले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो।
यस पत्रकार र लेखकको क्यारियरले अन्य महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त गरेको छ, छोटो उपन्यास साहित्य पुरस्कार को तेस्रो संस्करण जित्दा प्रकाश पार्दै, Calle Habana, कुनामा Obispo। माथि उल्लिखित पुस्तकहरू बाहेक, लेखकले other अन्य चाखलाग्दा कार्यहरू प्रकाशित गरेका छन्, यी सबै पाठकहरू र साहित्यिक आलोचकहरूबाट ठूलो ग्रहणशीलताका साथ छन्। हाल, लेखक च्यानलमा प्रस्तुतकर्ताको रूपमा काम गर्दछ Tele5.
1 Sonsoles एनेगा को जीवन को संक्षिप्त सारांश
1.1 Sonsoles Ónega, पत्रकार
1.2 Sonsoles Ónega, लेखक
2 Sonsoles Booksnega द्वारा पुस्तकहरू
2.1 क्याले हबाना, ओबिसपोको कुना (२०० 2005)
2.2 जहाँ भगवान हुनुहुन्नथ्यो (२००))
2.3 प्रेम पछि (२०१ 2017)
2.4 एक हजार चुम्बन निषेध (२०२०)
Sonsoles एनेगा को जीवन को संक्षिप्त सारांश
सोनसोल एनेगा साल्सेडोको जन्म बुधबार, नोभेम्बर ,०, १ 30 .1977 मा भएको थियो। उनी प्रसिद्ध गालिसियाली पत्रकार र लेखक फर्नान्डो एनेगा र मारिसोल साल्सेडो बीचको विवाहको दोस्रो छोरी हुन्। उनको जवानीको समयमा, सोनसोल्स धेरै बुद्धिमान र पढ्न मन पराउने व्यक्ति हुन्, उनी पारिवारिक पुस्तकालयमा पुस्तकहरूको बीचमा रमाउँथिन्। उनको बुबाको पथबाट प्रेरित, एनेगाले पत्रकारिताको स्नातक अध्ययन गर्ने निर्णय गरे, र म्याड्रिडको सीईयू सान पाब्लो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेपछि उनले डिग्री हासिल गरे।
Sonsoles Ónega सधैं उनको निजी जीवन धेरै समझदार राखिएको छ। उनले २०० 2008 मा वकिल कार्लोस पारडोसँग विवाह गरे जसले गर्दा दुई छोरा भयो। उनीहरूको विवाह २०२० मा अन्त्य भयो, एक बर्ष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रक्रिया शुरु भएपछि।
Sonsoles Ónega, पत्रकार
अडियोभिजुअल मेडियामा विशेषज्ञताको साथ स्नातक गरे पछि, उनले प्रोफेशनलको रूपमा पहिलो चरणहरू शुरू गरे CNN +। २०० 2005 मा उनी टेलिभिजन नेटवर्कमा सामेल भए चार। त्यहाँ years बर्ष काम गरेपछि उनी च्यानलमा सामेल भए Tele5जहाँ उनले १० वर्ष संसदीय चिनारीको रूपमा सेवा गरे। यस माध्यममा उसको पत्रकारिता निरन्तर बढ्दै गएको छ।
२०१ 2018 मा, Sonsoles ले कार्यक्रम "या एएस नून" को मध्यस्थको रूपमा चुनौती लिनुभयो, जस मध्ये उनी अझै प्रस्तुतकर्ता हुन्।। आफ्नो अन्तिम उपस्थिति मध्ये, उनले पहिलो सीजन को आइतवार galas एनिमेटेड वास्तविकता २०२० मा "कडा घर"।
Sonsoles Ónega, लेखक
आज सम्म, एनेगाले interesting रोचक उपन्यासहरू सिर्जना गरेको छ। उनको पहिलो पुस्तक, Calle Habana, कुनामा ओबिस्पो, 2004 मा पेश भएको थियो; यस काममा लेखकले उत्पीडित क्युवाको अनुभव देखाउँछन्। जहाँ भगवान हुनुहुन्न थियो (२००)) उनको दोस्रो प्रकाशन थियो। यो एउटा काम हो जुन म्याड्रिडको आक्रमणको घटनाबाट प्रेरित हो जुन 2007M को रूपमा चिनिन्छ। पछि, लेखक प्रकाशित भयो बोनावलमा एन्काउंटरहरू (2010) र हामी जो यो सबै चाहान्छौं (2015)।
यद्यपि माथि उल्लिखित कार्यहरू उत्कृष्ट साहित्यिक गुणवत्ताका छन्, यो उनको पाँचौं पुस्तक हो जसले उनलाई सफलताको लागि आकर्षण गर्‍यो। यो उपन्यासको बारेमा हो प्रेम पछि (२०१ 2017), वास्तविक घटनाहरूमा आधारित। यो कथा 592 1930२ पृष्ठमा विकसित भएको छ र एउटा गोप्य प्रेमको बारेमा छ जुन १ XNUMX s० को दशकको विवादास्पद स्पेनको बिचमा झगडा हुन्छ। उनको उत्कृष्ट कलमको काम जारी राख्न लेखकले २०२० मा उनको पुस्तक प्रकाशित गरे एक हजार चुम्बन निषेधित, जसको पर्याप्त स्वीकृति छ।
यहाँ यस स्पेनिश लेखक को रचनाहरु को एक संक्षिप्त समीक्षा छ:
Calle Habana, कुनामा Obispo (2005)
यो Sonsoles Ónega द्वारा पहिलो पुस्तक हो। यो एक छोटो कथा उपन्यास हो, को तेस्रो संस्करणको लागि योग्य छोटो उपन्यास गीत पुरस्कार। यसले uba ० को दशकमा क्युवाको इतिहास प्रस्तुत गर्दछ र सोभियत संघको विघटनबाट भोग्नु परेको नतिजा। यसका मुख्य पक्षहरूमध्ये एक क्युबाली जनता पनि दिनदिन फिडेल कास्त्रोको दमनकारी शासनको बिरूद्ध शस्त्रास्त्र बिना संघर्ष र झगडा गर्दछन्। यो कथा २००० मा हवानाको यात्रामा लेखकको अनुभवबाट जन्म भएको हो।
यसको मुख्य पात्रहरू सायवी सिस्नेरोस बलिन र उनको छोरो सेबास्टियन हुन्; दुबै कास्ट्रोइज्मको बिरूद्ध आफ्नै तरिकामा लडाई गर्छन्। साईवी आफ्नो घर राम्रो अवस्थामा राख्न खोज्छन् - जबकि यसको वरिपरि सबै चीजहरू एक अर्कासँग मिल्दछन् - जसले आफ्नी श्रीमतीको फिर्तीको भ्रमलाई जीवित राख्दै वर्षौं पहिले टापु छोड्न सफल भएका थिए। सेबास्टिन आफ्नो पक्षमा असन्तुष्टिबाट सक्रिय भई संघर्ष गरिरहेछन्। यो कठोर यथार्थताले भरिएको कहानी हो जुन करोडौं क्युवालीहरू अझै बाँच्दछन्।
Calle हबाना, कुना ...
जहाँ भगवान हुनुहुन्न थियो (2007)
यो मार्च ११, २०० 11 मा म्याड्रिडमा भएको आक्रमण बारे लेखिएको पहिलो उपन्यास होजहाँ १ 191 १ मरे र करीव २,००० घाइते भए। कथा बिहान सबेरै सुरु हुन्छ, बिस्तारै बिभिन्न पात्रहरूको जीवन वर्णन गर्दछ। ती मध्ये एक राजनीतिज्ञ, पत्रकार, आप्रवासी, एक न्यायाधीश र एक अभियोजक छन्। निस्सन्देह, बारीक ढ of्गले भरिएको प्लट जसमा सबै नायकहरू हुन् जसले रेलका ट्र्याकहरूमा आफ्नो जीवन मिसाउँछन्।
त्यो दिन, एक इस्लामी समूह अल्का डे हेनारेस स्टेशनको गाडीमा चढे र विस्फोटक पदार्थ जम्मा गरे जसले गर्दा ठूलो नरसंहार भयो। एनेगाले यो पुस्तक पीडितको भावना र अनुभवमा केन्द्रित भई अपराधीहरूलाई महत्त्व दिएन। लेखक पुष्टि दिन्छन् कि प्रस्तुत तथ्यहरू पूर्णरुप सत्य छन्, घटना पछि continuous निरन्तर बर्षको बर्षमा उनीद्वारा संकलित आरोपहरु संग।
जहाँ भगवान हुनुहुन्न ...
प्रेम पछि (2017)
यस अवसरमा, एनेगाले before० को दशकमा स्पेनमा स्थापित प्रेम उपन्यास प्रस्तुत गर्दछ गृहयुद्ध. यो सफल शीर्षक लुक्ने उत्कटताको कथा भन्छ - वास्तविक घटनाहरूमा आधारित। काम यति राम्रोसँग सम्पन्न भयो कि यसले XXII फर्नांडो लारा उपन्यास पुरस्कार जित्यो। यसको मुख्य पात्रहरू हुन्: कारमेन ट्रीला - एक दुखी विवाहमा अवरुद्ध महिला - र सेनाका कप्तान फेडेरिको एस्कोफेट।
सबै कुरा त्यस समयमा हुन्छ जब क्याप्टन एस्कोफेटको स्पेनमा र क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताको लागि लडाईमा महत्वपूर्ण भूमिका थियो। कार्मेन, उनको लागि, कठिन समय पार गर्थे, किनकि यो त्यस्तो समय थियो जसमा महिलाको आवाज वा भोट थिएन। दुबै विद्रोही प्रेम बन्छन् जुन समाज र त्यस अवधिको द्वन्द्वको बिरूद्ध लड्दछ। एक महान कथा जसले पाठकलाई समात्छ र स्पानिशले बाँचिरहेको गाह्रो वास्तविकतामा उसलाई समेट्छ।
प्रेम पछि (गर्मी ...
एक हजार चुम्बन निषेधित (2020)
उनको अघिल्लो पुस्तकको सफलता पछि, एनेगाले यस समकालीन रोमान्टिक उपन्यास प्रस्तुत गर्दछ जुन ग्रान भिया डे म्याड्रिडमा सेट गरिएको छ। यस कथाको सुरुआत कन्स्टेन्सको सम्भावित बैठकबाट भयो - एक वकील र हालसालै सम्बन्धविच्छेद भएका - र मउरो - एक पादरी हालसालै रोमबाट आए। कारणले दुईवटा गन्तव्यहरू ल्यायो जुन उनीहरूको युवावस्थामा एक ठूलो भ्रममा बाँचिरहे, र त्यो विभिन्न कारणहरूको लागि तिनीहरू अलग हुनुपर्‍यो।
नायकहरु, २० बर्ष पछि बैठक, अन्तरालमा छोडेको ती सबै भावनाहरु लाई relive। त्यस पछि भावना, आवेग र अस्वीकारको आन्तरिक स struggle्घर्ष टुट्छ किनकि यो एक असम्भव सम्बन्ध हो। यो कथा - तेस्रो व्यक्तिमा कथित - यो sensitive१ संवेदनशील अध्यायहरूमा लेखिएको थियो जसमा दुई आत्मा जोडीहरू सुखद अन्तको लागि केवल तिर्सना गर्दछन्।
एक हजार चुम्बन निषेध ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » Sonsoles Booksnega द्वारा पुस्तकहरू
हेनरिक हाइन, अन्तिम जर्मन रोमान्टिक कवि। Poems कविता
सर्वश्रेष्ठ दर्शन पुस्तकहरु